Kyrgyzstan: Mitazona fitoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2018 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Português, македонски, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Foko-nasionalisma. Nanomboka tamin'ny adi-hevitra momba ny fiteny izany ary nifarana tamin'ny ady tany. Araka ny mahazatra, feno lainga ny vanim-potoana eo anelanelana. Noho izany antony izany indrindra, tena zava-dehibe ny andraikitra raisin'ny fikambanana media mahaleotena tahaka ny kloop.kg ao Kyrgyzstan amin'ny fanasarahana ny zava-misy tena ilaina amin'ny fandisoam-baovao.
Voalanjalanja sy tompon’ andraikitra ny fanangonam-baovao nataon-dry zareo (teny ifotony) momba ny famoriam-bahoaka notontosaina tao an-tanànan'i Mayevka, mifangarika amin'ny tatitra diso marobe nipoitra tamin'ny forum aterineto sy ny sampam-pahalalam-baovao vahiny nivoaka andro io ihany, milaza fa fanafihana efa nomanina mialoha tao amin'ny tanàna rosiana vitsy an'isa ara-poko ny famoriam-bahoaka.
Hita porofo fa diso tahaka izany ihany koa ny tsaho nilaza fa nisy nandoro ny sekoly iray tao an-tanànan'i Kant any avaratra sy hoe nisy ny fifandonana ara-poko tao Bishkek.
Na izany aza, olona dimy avy amin'ny foko samihafa no namoy ny ainy tamin'ny famoriam-bahoaka tao Mayevka, misy ny porofo- raha misy olona mila- ary mbola ho ela vao hilamina ny raharaha taorian'ny revolisiona ao amin'ity firenena Azia Afovoany ity.
Ary raha nanova ny sary manontolon'ny tafahoatra ny fanaitairana sy ny hiakiaka, dia ahitana fihetseham-po nasionalista sy manavakavaka hita ao amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Sergey Vysotsky [ru], mpanao gazety monina ao an-tanànan'i Karakol, faritra Issyk-Kul, nitatitra ny fanilikilihana fanahy iniana natao tamin'ireo mpanao gazety Rosiana tsy miteny Kyrgyz nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny fitondrana vaovao ao an-toerana. Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny fomba fijery vaovaon'ny fitondrana vaovao” hoy i Vysotsky hoe [ru]:
The Press Conference held for Karakol journalists with the governor of Issyk-Kul region, Mirbek Asanakunov… turned into a noisy debate, and almost grew into a scandal.
Participating Russian-speaking journalists asked to meet in an accessible language throughout, but faced a lack of understanding of their views on the part of the new leadership of the Kyrgyz language journalists and newspapers.
“Any person living in Kyrgyzstan is obliged to know the Kyrgyz language,” said the regional correspondent of the newspaper Kyrgyz Tuusu, Jeenbaev Turk. “It is time to hold all meetings only in the national language. “
Ny Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao ho an'ireo mpanao gazetin'ny Karakol niarahana tamin'ny governoran'ny faritra Issyk-Kul, Mirbek Asanakunov… dia nivadika ho adihevitra be, ary saika niteraka fanafintohinana mihitsy.
Nangataka ireo mpanao gazety miteny Rosiana mba hazava kokoa ny fiteny ampiasaina, saingy niatrika tsy fahazoana ny fomba fijerin'n'ny mpanao gazety sy ny gazety amin'ny teny Kyrgyz amin'ny ampahany amin'ny fitantanana vaovao.
“Tsy maintsy mahafantatra ny teny Kyrgyz ny olona rehetra monina ao Kyrgyzstan,” hoy Jeenbaev Turk, solontenan'ny gazety Kyrgyz Tuusu, . “Fotoana izao hanaovana ny fivoriana rehetra amin'ny tenim-pirenena. “
Vysotsky nanampy fa nitohy tsy nisy fampiasana mpandika teny ho an'ireo mpanao gazety tsy miteny Kyrgyz ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Ny Rosiana no mijanona ho fiteny ‘ofisialy’ ao Kyrgyzstan raha ny Kyrgyz kosa no fitenim- ‘mpanjakana’. 68,9% ihany amin'ny mponina no foko Kyrgyz, vitsy ihany raha oharina amin'ireo firenena Aziatika Afovoany ary ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny Bishkek renivohitra no mihevitra ny teny Rosiana ho fiteny voalohany. Fanampin'izany, noho ny fanjakazakany nandritra ny vanim-potoana Sovietika, foko maro an'isa marobe no nobeazina hahafantatra ny teny Rosiana fa tsy ny Kyrgyz.
Ho an'ireo liana momba ny toe-draharaha mikasika ny fananan-tany ao amin'ny firenena, manome topi-maso mahaliana momba ireo [mpahazo] tombontsoa sasany amin'ny fakàna tany sy ny fibodoana tany ny lahatsoratra iray ampy vaovao nosoratan'ilay bilaogera Akyikat [ru] mitondra ny lohateny hoe ‘Stop Squatting (Atsaharo ny Fakana tany an-keriny), lohahevitra izay lohalaharana ao amin'ny fiainana ara-politika ao Kyrgyzstan amin'izao fotoana izao. Tamin'ny famehezana, manao antso amin'ny fitondrana vonjimaika ny mpanoratra mba handray fepetra haingana momba ny raharaha:
“Please initiate a moratorium on the granting of land plots for individual housing construction and start a mortgage program for the erection of a multi-storey public housing! We want to live in a beautiful city and not be afraid to visit all its parts,” the user posts in reference to the recent instability in some of the capital Bishkek's surrounding villages.”
“Azafady, mametraha fampitsaharana amin'ny fanomezana tany hananganana trano ho an'ny tsirairay ary manomboha fandaharana fanomezana antoka (hypothèque) hananganan'ny fanjakana trano maro rihana! Te honina amin'ny tanàna mahafinaritra izahay ary tsy matahotra hitsidika ny faritra rehetra ao aminy, “hoy ny mpiserasera iray ho fanondroana ny korontana vao haingana tao amin'ny tanàna sasany manodidina an'i Bishkek renivohitra
Na dia niala tanteraka tamin'ireo fanontaniana mavesatra aza ireo mpiserasera sasany, fa nifidy hankalaza ny fahatongavan'ny Lohataona ao amin'izany firenena be tendrombohitra mahafinaritra miavaka izany.
Afganistana 7 andro izay